warkii.com » RASMI: PSG Oo Warbixin Kasoo Saartay Dhaawaca Kylian Mbappe & Farriintii Laacibkani U Diray Taageereyaasha
RASMI: PSG Oo Warbixin Kasoo Saartay Dhaawaca Kylian Mbappe & Farriintii Laacibkani U Diray Taageereyaasha
Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa warbixin kasoo saartay dhaawac soo gaadhay weeraryahankeeda da’da yar ee Kylian Mbappe intii ay socotay ciyaartii ay Jimcihii ku kulmeen Saint-Etienne finalka Frech Cup.
Kylian Mbappe ayaa garoonka laga saaray qaybta hore ee kulankii Jimcihii, waxaana shaki la gelinayaa haddii uu taam u noqon karayo kulamada Champions League ee bisha dambe ee August dib loo bilaabi doono, iyadoo wareegga siddeedda ay isku beegmeen kooxda Talyaaniga ah ee Atalanta.
PSG waxay sheegtay in laacibkeedan uu dhaawac halis ahi kasoo gaadhay kuraanta lugta midig markii uu qalad ku galay Loic Perrin ciyaartii ay 1-0 kaga badiyeen Saint-Etienne, isl amarkaana baadhitaanno soconaya muddo 72 saacadood ah lagu samaynayo.
Warbixinta Paris Saint-Germain ayaa lagu sheegay in dhaawaca halista ah ee kasoo gaadhay kuraanta, waxaanay tidhi: “Dhaawac culus ayaa kasoo gaadhay kuraanta lugta midig. 72 saacadood kaddib ayaa lagu samayn doonaa 72 saacadood kaddib daaweynta iyo sawirrada laga qaaday kuraanta oo la daraasayn doono.”
Warkan oo naxdin ku ah tababare Thomas Tuchel oo isku diyaarinaya kulanka kooxdiisu 12 August ku waajahayso Atalanta oo ay magaalada Lisbon ku wada ciyaari doonaan, ayaa waxa aanu laacibkani fursad u helayn ciyaarta Lyon ee finalka French League Cup oo qorshaysan 31 July.
Mbappe ayaa isaguna ka hadlay dhaawaca soo gaadhay, waxaanu sheegay inuu dareemayo wanaag, iyadoo uu taageereyaashuna uga mahad celiyey farriimaha ay usoo dirayaan.